Umbono we-LS | Umkhiqizi wekhamera we-4G Solar Powered Security Camera kanye nomhlinzeki
Ukufakwa kwethu kwekhamera ye-solar yamandla ephansi akudingi izintambo nezintambo zenethiwekhi, futhi kusetshenziswa inethiwekhi yeselula ye-4G, ngakho-ke ungayifaka enkundleni noma ngaphandle ngaphandle kokukhathazeka ngemigqa ecasulayo. Amakhamera elanga ahlome nge-15600 mah noma amabhethri we-30000 Mah noma ama-30000 Mah, angahlala ngaphezu kwezinsuku eziyi-7 ngemuva kokushaja okugcwele, asisize sisuse indlela yendabuko yokushaja 220 v.
Ubuchwepheshe obuzwayo be-microwave Lapho uhlelo selitholakele, luzothumela ngokushesha isexwayiso kwi-smartphone yakho bese sigcina imizuzwana eyi-10 yevidiyo erekhodwe ngokuzenzakalela kuhlelo lokusebenza.
Ikhamera ye-PTZ Powered Powered Powered Powered PTZ
Amakhamera wamandla aphansi, amakhamera elanga ajwayele esimweni esishisayo, lapho into eshukumisayo idlula, ikhamera izovuka. Isikhathi sokuqopha singu-10s, esingasethwa ngohlelo lokusebenza lwefoni ephathekayo.Lapho ikhamera ithola umuntu, uhlelo lokusebenza leselula lizocindezela umyalezo we-alamu.Le khamera yamukele imodi yokungeniswa kwe-microwave, kanye nebanga lokutholwa kumamitha ayi-10, okusona kabili ibanga lokutholwa kwemodi evamile ye-PIR.Imvamisa kusemodi ye-infrared ebusuku. Uma ikhamera ithola umuntu, izovula ukukhanya okumhlophe.Ikhamera ingakhuluma nomunye ngohlelo lokusebenza lwefoni ephathekayo.
Ikhamera ye-1080p 4g 5.5W
Amakhamera we-4G Solar alungele iminyango emizini, amayadi, amachibi ezinhlanzi, izihlahla, amapulazi, amapulazi, izimayini, izindawo zokwakha, nazo zonke izindawo ezingenakuphikiswa.Amakhamera wamandla aphansi, amakhamera elanga ajwayele esimweni esishisayo, lapho into eshukumisayo idlula, ikhamera izovuka. Isikhathi sokuqopha singu-10s, esingasethwa ngohlelo lokusebenza lwefoni ephathekayo.Le khamera yamukele imodi yokungeniswa kwe-microwave, kanye nebanga lokutholwa kumamitha ayi-10, okusona kabili ibanga lokutholwa kwemodi evamile ye-PIR.Imvamisa kusemodi ye-infrared ebusuku. Uma ikhamera ithola umuntu, izovula ukukhanya okumhlophe.
I-1080p 24/7 Power 4G Solar Powered Dome PTZ
Ukuqoshwa kwamavidiyo angama-24, lapho amandla ephansi kune-40%, shintshela kwimodi yevidiyo enamandla. Imodi yevidiyo enamandla ye-Low-Power ukuthi ikhamera yelanga isesimweni esishisayo, futhi ikhamera ihanjiswa kuphela lapho into eshukumisayo idlula.Lapho ikhamera ithola umuntu, uhlelo lokusebenza leselula lizocindezela umyalezo we-alamu.Le khamera yamukele imodi yokungeniswa kwe-microwave, kanye nebanga lokutholwa kumamitha ayi-10, okusona kabili ibanga lokutholwa kwemodi evamile ye-PIR.Imvamisa kusemodi ye-infrared ebusuku. Uma ikhamera ithola umuntu, izovula ukukhanya okumhlophe.Ikhamera ingakhuluma nomunye ngohlelo lokusebenza lwefoni ephathekayo.
I-1080P ephansi yamandla wanganini ukubhekwa kwamanzi i-4G IP ihlakaniphile enobuhlakani be-solar powered system Ptz dome Outdoor Security Camera